M.Jo, Author at
Articles by M.Jo
Midowga Musharaxiinta: “Ma aqbaleyno boobka qaawan ee doorashadu ku bilaabatay”
November 27, 2021 M.Jo 0
Midowga Musharaxiinta oo qoraal soo saaray goor dhoweyd ayaa sheegay ineysan aqbali doonin doorashooyinka degaanada qaar ee lagu bilaabay doorashooyinka degaanada qaar ee lagu bilaabay boob qaawan oo la isu awood sheegtay. qoraalka Musharaxiinta ayaa lagu sheegay in sidoo kale lagu tuntay habraacyadii doorashada, taasoo ay xuseen iney halis gelineyso xasiloonida dalka iyo jiritaanka dowladnimada. HOOS KA AKHRISO QORAALKA MUSHARAXIINTA
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad Goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayyid Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Maanta gaaray Magaalada Garoowe ee Caasimadda Maamulka Puntland, iyadoona halkaas lagu soo dhaweeyay. Garoonka diyaaradaha Gen. Maxamed Abshir ee Garoowe ayaa waxaa Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland kusoo dhaweeyay, Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cismaan Karaash, Wasiiro, Xildhibaano iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada. Inta uu joogo Garoowe, Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland ayaa waxaa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash, iyagoon ka wada hadli doona Arrimo qorsheysan. Warar la helayo ayaa sheegaya in socdaalka Maxamuud Sayyid Aadan ee Puntland uu la xiriiro Arrimo ku aadan doorashada dalka ka dhaceysa gaar ahaan tan Golaha Shacabka oo ka bilaabatay laba maamul Goboleed. Dhawaan ayey markii Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed uu muddo todobaad ah ku sugnaa Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal, isagoona kulamo ku saabsan doorashada la yeeshay dhiggiisa Saciid Cabdullaahi Deni.
Guddiga hirgelinta doorashada Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka horyimid Go’aankii Maanta kasoo baxay Guddiga doorashada heer Federaal ee lagu hakiyey qabashada doorashada kursiga tirsigiisu yahay HOP103 oo uu ku fadhiyo Guddoomiyihii Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Guddoomiyaha Guddiga dorashada Koonfur Galbeed ee SEIT Yuusuf C/qaadir Baafo oo warbaahinta kula hadlay Magaalada Baydhabo ayaa sheegay in Guddiga FEIT aanu xaq u laheyn inuu joojiyo doorashada kursiga HOP103, xili cabasho uu kasoo gudbiyey Jawaari. Guddoomiyaha Guddiga dorashada Koonfur Galbeed ayaa waxaa uu caddeeyay in doorashada kursiga tirsigiisu yahay HOP103 la qabanayo Maanta berri oo Axad ah, isla markaana aysan jirin wax cabasho ah oo Guddigooda loo soo gudbiyay. Guddiga doorashada heer Federaal ayaa Maanta soo saaray Go’aan lagu hakinayo doorashada kursiga HOP103, kadib markii loo diiday inuu u tartamo Prof. Jawaari oo ku fadhiyey, isagoona Guddiga u gudbiyey cabasho ku aadan hanaanka loo marayo kursiga ee laga hor istaagay.. Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maalmo kahor ku dhawaaqay in loo diiday inuu u tartamo kursiga uu ku fadhiyey afartii sanno [Sii aqri]
Guddiga Doorashooyinka Koofurgalbeed Oo Ka Hor Yimid In La Hakiyo Kursiga HOP103
Guddiga doorashooyinka Koofurgalbeed ayaa soo saaray qoraal ay ku shaacinayana doorashada afar kursi oo uu ku jiro kursiga HOP103 ee guddiga doorashada Heer Federal hakiyay. Sida Ay U muuqata ayaa ah in ay ka soo horjeeateen Goankii ka soo yeeray Guddiga Xalinta Khilaafka Doorashada Balse Waxaa la dhihi kara Tan ayaa bilow u ah khilaafka maamulka doorashada ee ka dhex bilaaban doonta Guddiyada doorashada heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed.
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Berri ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeedo uu halkaa ka taagan yahay, iyadoo ay wadaan Ciidamada PSf ta iyo Ciidamo kale duwan oo iskugu jira Boolis iyo Militari kuwaas oo taageersan Madaxweynaha Puntland, Dowlad Goboleddka Puntland ayaa saacaddihii lasoo dhaafay Boosaaso geesay boqolaal askari oo kala yimid magaalooyinka Garowe iyo Gaalkacyo, waxaana maamulka ay wacad ku mareen in ay soo celin doonaan xasiloonidii magaaladaasi ay all cilan doonaan islamarkaana dhaqan galinayaan xilka qaadistii agaasimihii PSF ta oo iska diiday Amarka Madaxweyne Deni. Cabsi badan ayay dareemayaan dad ku sugan magaalada Boosaaso, waxaana ay sheegeen in magaalada ay buux dhaafiyeen ciidamo kala taageersan labada dhinac. Hay’adda PSF ta ayaa shalay mar kale ku celisay in aysan aqoonsanayn xilka qaadistii Madaxweyne Siciid Deni ku sameeyay Agaasimaha PSF Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano. Sidoo kale, Shalay ayey ahayd markii shir jaraa’id ay qabteen saraakiil ka tirsan PSF iyagoo sheegay in aysan waxba iska beddelin mowqifkii hay’addu kaga hortimid xilka qaadistii uu sameeyay Madaxweynaha Puntland. Puntland ayaa cabsi weyn ka qabta [Sii aqri]
Weerar Bambaano Oo ka dhacay Baraawe iyo Faahfaahin laga helayo
Wararka laga Helayo Magaalada Baraawe ayaa kas Sheegaya weerar loo adeegsaday bambo gacmeed oo xalay lagu weeraray Hoyga ee Magaaladaasi uu ka degan yahay Gudoomiyihii hore ee degmada Baraawe. Kooxo hubeysan ayaa beegsaday guri gudoomiyaha , waxaana la sheegay in Ciidankii ilaalada ka hayay ay rasaas ku fureen. Dhanka kale Gudoomiyaha la weeraray oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan jirin wax khasaare ah oo kasoo gaaray weerarka isaga iyo sidoo kale ciidankii ilaalada ka hayay. Howlgallo lagu xaqiijinaayo Ammaanka Magaalada ayaa ka socda Baraawe Xilli dhawaan lagu waddo in lagu qabto doorashada golaha Shacabka.
Guddiga Doorashada Oo Hakiyey Doorashada Kursiga Uu Ku Fadhiyey Jawaari Balse Aan laga Sugeeyn Natiijo Guddiga
Guddiga doorashada Heer Federaal ayaa hakiyay doorashada Kursiga Hop103 oo uu afartii Sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sh Cismaan Jawaari, kaddib markii laga hor istaagay inuu kuraas u tartamo. War-saxaafadeed kasoo baxay Guddiga doorashada ayaa lagu sheegay in Guddiga uu isku raacay in la hakiyo doorashada Kursiga tirsigiisu yahay Hop103 oo uu Jawaari ka keenay cabasho hanaanka loo marayo doorashada kursigaas. Guddiga doorashada Heer Federaal ayaa guddoonka iyo Guddiga doorashada Maamulka Koonfur Galbeed faray in la joojiyo qabashada doorashada kursiga tirsigiisu yahay 103 ilaa amar danbe, isla markaana laga soo gudbiyey cabasho. Ugu dambeyn Guddiga doorashada Heer Federaal ayaa tilmaamay in amarka hakinta Kursiga tirsigiisu yahay Hop103 uu soconayo illaa inta Guddigu ka xalinayo tabashooyinka ka soo yeeraya habraaca loo maray. Si kastaba Ha ahaatee Guddiga Doorashada Heer Federaal Ma ahan mid awood u leh goaan ka gaarista Cabashada soo gaarta Waa mid uun kaliya Shacabka ku mashquuliya in ay ku jiraan baaritaan aan waxba ka soo bixin.
Maxamed Mursal Oo Ku Soo Baxay Doorasho La Sii Ogaa Qofka Ku Soo Baxayam
Guddoomiyihii Hore ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa loo doortay inuu mar kale noqdo Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka. Maxamed Mursal ayaa u tartamayay kursiga sumadiisu tahay HOP182, isagoo helay codad gaaraya 88 Cod, ka dib doorasho goor_dhow ka dhacday Magaalada Baydhabo. Maxamed Mursal ayaa horay loogu eedeeyay in kursigiisa aysan ku tartameyn Musharaxiintii u baahneyned, islamarkaana uu soo xushay qofka la tartamaya Asiga . Si kastaba ha ahaatee Doorashada golaha Shacabka ee hadda socoto ayaa ah mid lasii ogyahay natiijada doorashadda Waana mid ku gadaaman Masuq maasuqa iyo awood sheegasho Waxaana ay keen kartaa gacan ka hadal uu dhiig ku daato Waxaana lagu eedeeynayaa in uu ka danbeeeyo madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday Farmaajo iyo Taliyahii hore NISA Fahad kaas Oo Lagu eedeeyay Xasuuqa muwaadiniin somaliyeed.
Weerar Lagu Qaaday Saldhiga AMISOM Iyo Alshabaab Oo Sheegtay Weerarkaasi
Kooxda Al-shabaab ayaa sheegtay weerar loo adeegsaday Madaafiic ay ku dileen Askar ka tirsan Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwo kasoo jeeda Uganda oo ku sugnaa Saldhig Ciidan ee ku yaalla degaan hoostega degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose. Weerarkaan ayaa ka dhacay Saldhig Ciidanka AMISOM ay ku leeyihiin degaanka Laantabuuro ee duleedka degmada Afgooye, waxaana la sheegay in gudaha Saldhiga ay ku dhaceen qaar kamid ah madaafiicda ay Al-shabaab ku weerareen Xeradaasi. Si kastaba Ha ahaatee Waxa ay ku soo qoreen Bartooda Internetka Sida Ay sheegteen. Waxaa ay intaas kusii dareen in Madaafiicda qaarkood ay ku dhaceen Teendhooyin, isla markaana burburiyey qeybta Isgaarsiinta iyo Caafimaadka saldhigga Laanbuuro ee duleedka degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanka kale ma jiro wax war ah Ee ka Soo Baxay Taliska Ciidanka Midowga Afrika ee AMIOSM oo ay uga hadlayaan weerarka khasaaraha dhaliyey ee Al-shabaab ku qaadeen Saldhiga Ciidanka ku leeyihiin degaanka Laantabuuro, mana ahan markii ugu horreeysay oo la weeraro halkaas.
November 26, 2021 M.Jo 0
Guddiga Xallinta Khilaafaadka doorashooyinka ayaa ugu baaqay Musharaxiinta Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya in wixii tabasha ah ee ay qabaan u soo gubiyaan Guddiga, si loo xaliyo tabashada lasoo gudbiyo. Guddiga Xallinta Khilaafaadka ayaa sheegay inay ka Jawaabeen eedeyntii Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha u jeediyeen Guddiga, taasi oo ku saabsaneyd in kuraasta Golaha Shacabka lagu haayo boob oo aysan waxa socda aheyn doorasho. Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Maxamed Ibraahim Barre oo la hadlay Warbaahinta dowladda ayaa tilmaamay in Musharax kasta oo tabanayo cabasho ay u garnaqi doonaan oo aysan ogolaan doonin in muwaadin kasta aan la duudsiin doonin xaquuqdooda aas aasiga ah ee ku saabsan inuu wax doorto ama la doorto. “Musharax kasta waxaan ka codsaneynaa in cabashadooda ay anaga toos noo soo marsiiyaan oo aysan la aadin baraha bulshada”. Ayuu yiri Maxamed Ibraahim Barre oo ugu baaqay Musharaxiinta Baarlamaanka inay cabashada ay qabaan u soo gudbiyaan Guddiga. Hadalka Guddiga ayaa kusoo aaday, iyada oo Midowga Musharaxiinta ay sheegeen in sida ay ku socoto doorashada Golaha Shacabka ay tahay boob, isla markaana boobka doorashada laga dhaxli karo [Sii aqri]